China XB-004, Pink Grils Bike, 2 wiil nwere nkata, ndị na-emepụta wiil ọzụzụ na-egbuke egbuke na ndị na-ebubata ya | Xuxiang
XB-004, Pink Grils Bike, wiil abụọ nwere nkata, wiil ọzụzụ na-egbuke egbuke
XB-004 etiti High carbon ígwè ịgbado ọkụ etiti. Ihe mkpuchi aka na-adịghị amị amị na nke na-adịgide adịgide, saddles na-eku ume na nke na-agaghị eyi, taya gbasapụrụ agbachapụ, na agba gburugburu gburugburu iji chebe uto dị mma nke ụmụ ọhụrụ! Ịgba ịnyịnya ígwè ndị mara mma na-eme ka ụmụaka nwee mmasị ịnya ịnyịnya na egwuregwu!
agba Pink, Purple, Red; Blue, ma ọ bụ dị ka mkpa gị
Ntọhapụ ngwa ngwa Aluminom alloy
Mudguard Igwe igwe
ụmụaka dị ọnụ ala ịnyịnya ígwè ụmụaka ịnyịnya ígwè
Ịnya ụgbọ ala dị mma & nke dị mma: ergonomic na oche a na-agbanwe agbanwe, dị mma maka ịnya ụgbọ ala. Mkpuchi zuru oke na Silicone dị nro maka nchekwa ụmụaka.
· Ìhè arọ & obere akpa: Aerospace ọkwa aluminum alloy frame na nwere uche PU ụdị na-eme ka anyị Kids Bike sturdy, fechaa na portable.Streamline na minimalist imewe na okenye ụgbọ nka craftsmanship usoro maka elu àgwà ụmụaka anyịnya igwe.
· Kere maka Young Rider: Nhazi nke igwe kwụ otu ebe dabere na ergonomics ụmụaka. Ụkwụ ọzụzụ buru ibu na-eme ka ọ dị mfe karị ịfefe ihe mgbochi na ọgbụgbọ. Ọ dị mfe ịgbakọta ma biko chebara ịdị elu ụmụaka echiche.
Nke gara aga: XB-005, igwe kwụ otu ebe, mgbịrịgba na nkata, wiil ọzụzụ
Osote: XB-003/ ụmụaka dị ọnụ ala ịnyịnya ígwè ụmụaka ịnyịnya ígwè nwa ịnyịnya ígwè
XB-010/ Onye na-emepụta ihe na-ere ụmụaka igwe kwụ otu ebe
XB-016, 12 14 16 18 20 inch nwa ịnyịnya ígwè, nwere ...
Ụlọ ọrụ China na-emepụta igwe igwe / ụmụaka bi ...